I-china i-led ledd620620 isilingi i-dual dome dome ukukhanya okusebenzayo kokukhanya kunye nabenzi bokulawula udonga kunye nabathengisi | Wanyu
Ukukhanya kwesitalato se-LED kunye nokuKhanya okuKhanya
I-LEDD620 / 620 ibhekisa kwindlu yangaphakathi ephindwe kabini ukukhanya kokusebenza kwezonyango.
Imveliso entsha, ephuculweyo ngokwesiseko semveliso yokuqala. IAluminiyam ingxubevange iqokobhe, uhlaziyo lwangaphakathi oluphuculweyo, isiphumo sokuhambisa ubushushu esingcono. Iimodyuli zezibane ze-7, ii-bulbs ezingama-72 zizonke, imibala emibini emthubi namhlophe, iibhalbhu ezikumgangatho ophezulu ze-OSRAM, ubushushu bombala 3500-5000K uhlengahlengiso, i-CRI ngaphezulu kwe-90, ukukhanya kungafikelela kwi-150,000 Lux. Iphaneli yokusebenza yiLCD yokuthinta isikrini, ukukhanya, ubushushu bombala, i-CRI ibhekisa kutshintsho lokudibana. Izixhobo zokumisa zinokuhanjiswa ngokuguqukayo kwaye zibekwe ngokuchanekileyo.
Faka isicelo kwi
■ utyando lwesisu / oluqhelekileyo
■ izifo zabasetyhini
■ utyando lwentliziyo / lweemithambo / lwesifuba
Neur unyango lweeurosurgery
■ traumatology / emergency / OKANYE
■ urology / UKUJIKA
■ i-endoscopy Angiography
1. Ingalo yokuNqunyanyiswa kobunzima obukhanyayo
Ingalo yokumiswa kunye nobunzima bokukhanya kunye noyilo oluguquguqukayo kulula ukuloba kunye nokubeka indawo.
2. Shadow ukusebenza simahla
I-arc isibane sokusebenza esibonisa ukukhanya, uyilo olunemithombo emininzi, uyilo olukhanyayo lweeyure ezingama-360 kwinto yokujonga, akukho moya. Nokuba inxenye yayo ivaliwe, ukongezwa kwezinye iiplanga ezifanayo akuyi kuchaphazela ukusebenza.
3. Umboniso oPhakamileyo weeBhalbhu ze-Osram
Ibhalbhu ephezulu yokubonisa inyusa ukuthelekisa okubukhali phakathi kwegazi kunye nezinye izicwili kunye namalungu omzimba womntu, esenza ukuba umbono kagqirha ucace gca.
4. Ukutshintsha ngokuhambelana
Ubushushu bombala, ukukhanya kwezibane kunye nesalathiso sokuhanjiswa kombala kokukhanya kokusebenza kwezonyango kunokutshintshwa ngokulandelelana ngepaneli yolawulo yeLCD.
Izibane ezikhethekileyo ze-endoscope zingasetyenziselwa iinkqubo zotyando ezingenayo.
5. Ukuqinisekisa kwakhona iNkqubo yeSekethe
Isekethe efanayo, iqela ngalinye lizimele kwelinye, ukuba elinye iqela lonakele, amanye anokuqhubeka nokusebenza, ke ifuthe ekusebenzeni lincinci.
Ukukhuselwa kwe-voltage ephezulu, xa umbane kunye nekhoyo ngoku kugqithise kwixabiso eliqingqiweyo, inkqubo iya kuthi ngokuzenzekelayo inqumle amandla okuqinisekisa ukhuseleko kwisekethe yenkqubo kunye nokukhanya okuphezulu kwezibane ze-LED.
6. Ukukhethwa kwezinto ezininzi
Ngokukhanya kokusebenza kwezonyango, kuyafumaneka ngolawulo lwodonga, ulawulo olukude kunye nenkqubo yokuxhasa ibhetri.
Ukukhanya kokuKhanya (lux)
Ubushushu boMbala (K)
Unikezelo lombala Index (Ra)
Ukufudumeza ukuya kwiRatio yokuKhanya (mW / m² · lux)
Ubunzulu bokukhanya (mm)
Ububanzi Light Spot (mm)
Ubungakanani be-LED (pc)
Ubomi benkonzo ye-LED (h)
Egqithileyo Ukukhanya kwesitalato se-LED sokuKhanya kuKhanya
Okulandelayo: Ukukhanya kwesitalato se-LED esingaphantsi kwe-700/700
Uhlobo lwe-LED oluBanzi lweNdonga ye-LED yoKhanyiso oluKhanyisiweyo ...
Ukukhanya koMgangatho woLwazi lweZibane ze-LED
Ukukhanya kwelanga lokukhanya kwe-LED
I-LEDL260 CE Uhlobo oluVunyelweyo lokuma lwe-LED ye-Exa ...
LEDD500 / 700C + M Isilingi LED Double Dome Operatin ...